Hordhaca Koorsada Dareenka Foga - Geofumadas
Soo ogow awoodda dareenka fog. Khibrad, dareen, falanqayn iyo arag waxkastoo aad sameyn kartid adigoon joogin.
Sensing Remote (RS) waxaa ku jira dhowr ah farsamooyin qabasho fog iyo falanqayn macluumaad taas oo noo oggolaaneysa inaan ogaano deegaanka iyadoo aan joogin. Macluumaadka faraha badan ee indha indhaynta Dunida waxay noo oggolaaneysaa inaan wax ka qabanno arrimo badan oo deg deg ah oo deegaan, juqraafi iyo juqraafi ah.
Ardaydu waxay yeelan doonaan faham adag oo ku saabsan mabaadii'da jireed ee 'Remote Sensing', oo ay ku jiraan fikradaha shucaaca elektaroonigga ah (EM), waxay sidoo kale sahamin doonaan si faahfaahsan ula falgalka shucaaca EM ee jawiga, biyaha, dhirta, macdanaha iyo noocyada kale. dhulka ka fog aragtida dareenka fog. Waxaan dib u eegi doonnaa dhowr meelood oo loo adeegsan karo 'Remote Sensing', oo ay ka mid yihiin beeraha, cilmiga dhulka, macdanta, biyaha, keymaha, deegaanka iyo waxyaabo kaloo badan.
Koorsadani waxay kugu hagaya inaad wax ka barato oo aad hirgaliso falanqaynta xogta ku saabsan Xanuunka 'Remote Sensing' oo aad u wanaajiso xirfadahaaga falanqaynta geospatial.
Fahmaan fikradaha aasaasiga ah ee Xasaasiga Ka Fog.
Fahmaan mabaadii'da jireed ee ka dambeysa is-dhexgalka shucaaca EM iyo noocyada kala duwan ee daboolka ciidda (daaqsinka, biyaha, macdanta, dhagaxyada, iwm.).
Fahmaan sida qaybaha bey'adu u saameyn karaan farriinta ay duubtay aaladaha fog fog ee dareenka iyo sida loo saxo.
Soo dejiso, hore u-diyaarin, iyo sawir-sameeye dayax gacmeed.
Codsiyada dareemayaasha fog.
Tusaalooyin wax ku ool ah oo ka mid ah codsiyada dareemayaasha fog.
Baro Dareemka Fogaanta oo leh barnaamij bilaash ah
Aqoonta aasaasiga ah ee Nidaamyada Macluumaadka Juquraafiga.
Qofkasta oo xiiseynaya Xanuunada Fog ama adeegsiga xogta macluumaadka.
Ku rakibay QGIS 3
Ardayda, baarayaasha, aqoonyahannada, iyo kuwa jecel adduunka GIS iyo Remote Sensing adduunka.
Qof kasta oo raba inuu adeegsado xogta xayawaanka si uu u xalliyo arrimaha juqraafi ahaan iyo deegaanka.
Post Previous" Hore Koorsada ETABS ee injineernimada qaabdhismeedka - Heerka 2
Post Next Hordhaca koorsada qaabeynta iyadoo la adeegsanayo Ansys workbenchNext »